Sidee Waxaad Edit karaa Information for Music la Mp3tag u Mac
> Resource > Mac > Mp3tag u Mac: Sidee Waxaad Edit karaa Information for Music on Mac
Mp3tag, qalab si sahlan loo isticmaalo in wax ka bedel macluumaad tag songs daaqadaha, ma laha kale Mac ah halkii. Dadka isticmaala Windows oo kaliya u guuraan Mac laga yaabaa in uu seegi this smart qalab qarka u saaran yihiin in ay ka heli kulan saxda ah ee Mac, si ay nolol sahlan. Ha hadda dhididka. Halkan waa fursad wanaagsan. Wondershare TidyMyMusic u Mac qaadan kartaa taaganyihiin ee Mp3tag on Mac ee dareenka ah in si fiican wax tag tafatirka samayn karaa. Waxaa si toos ah u ogaadaa macluumaad ID3 gabaygii kasta oo ka heli farshaxanka album, lyrics waqti isku mid ah. Intaa waxaa dheer, in aad la shakhsiyeeyo kartaa heeso la shaqayn tafatirka barnaamijka ee. Ma sugi karaa in ay isku day ah? Marka hore kala soo bixi barnaamijkan ka dibna raaci tutorial ah oo faahfaahsan hoos ka.
1 in Mp3tag dar ururinta music aad u Mac
maktabadda Lugood si toos ah dari doonaa Lugood nidaamsan marka barnaamijka ka furmay markii hore.
Waayo, music deegaanka, waxaad u baahan tahay in ay gacanta jiidi oo iyaga hoos u Music ah tab hagaagsan. Ama guji File furan si aad u hesho dhammaan music ee barnaamijka.
2 ogaashaha macluumaad tag doorasho kasta gabaygan
Dooro hees iyo riix batoonka Aqoonso sida hoos ku qoran. Markaas dhammaan macluumaadka ku saabsan in la baadhi karo doonaa internet ama database ah, oo ay ku jiraan artist, farshaxanka, lyrics oo dheeraad ah oo ka soo.
Fiiro gaar ah: Mararka qaarkood, haddii aad leedahay heeso badan si ay u aqoonsadaan, waxaad iyaga oo dhan dooran kartaa oo guji badhanka Aqoonso soo xulay in meel la mid ah sida Aqoonso. Si kale oo fudud waxay noqon doontaa in guji badhanka Scan ka dibna music oo dhan waxaa la cayimi doonaa oo tus ka ayaa sidoo kale laga saari karo.
Ka dib markii warbixin oo dhan la jira, riix batoonka codso in ay iyaga isku biiraan si ay heesaha oo mid mid. Waxa kale oo aad dooran kartaa dhowr heeso aad u codsato macluumaadka mar.
3 Edit macluumaad song sida aad jeceshahay
Haddii maamulka fiican, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ku darto erayada dheeraad ah si ay macluumaadka. Ha welwelin. Waxaad ku heli kartaa. Guji Edit icon ka dibna ku qor wax kasta oo macluumaadka aad rabto in wax kasta oo sida artist, sifayn iyo in ka badan. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa farshaxanka si ay image kasta oo aad jeceshahay.
Dhamaan waxaa la samayn, oo hadda macluumaad buuxa kuu soo gudbin karaa music ay ku ciyaaraan kasta oo qalabka la qaadi karo aad rabto. Waxa kale oo aad loo ogol yahay inuu ka ciyaaro music la Mp3tag Mac by double-ilamaha. Raadi barnaamijkan mid fiican? Ha ka maqnaan fursad this. Download mid si uu u siiyo go a. Marna gabi doono.